SNAP: Synergizing Nonviolent Action and Peacebuilding (Burmese)
ဤလမ်းညွှန်စာအုပ်သည် ပဋိပက္ခ အသွင်ပြောင်းလဲခြင်း သို့ ဦးတည်ရာတွင်နည်းလမ်းများအား မဟာဗျူဟာကျကျ ထိထိရောက်ရောက် အသုံးပြုနိုင် စေရန်ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်သူများ နှင့် အကြမ်းမဖက်လှုပ်ရှားမှု ဖော်ဆောင်သူများ အကြား ချိတ်ဆက်ရန် ကြိုးပမ်းခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် တရားမျှတမှုနှင့် ရေရှည်တည်မြဲသော ငြိမ်းချမ်းရေးကိုမြှင့်တင်ရန်အ ပြန်အလှန်ပြောဆိုခြင်း၊ တိုက်ရိုက်လုပ်ဆောင်မှုများ နှင့် နည်းလမ်းများကို ပေါင်းစပ် အသုံးချနိုင်ကြောင်း ပြသခြင်းဖြစ်သည်။ ဤလမ်းညွှန်စာအုပ်သည် ၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းခွင်တွင် အကြမ်းမဖက် လှုပ်ရှားမှုနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ခြင်း နည်းလမ်းများအား မည်သို့ ပေါင်းစပ်အသုံးပြုရမည်ကို လေ့လာလိုသည့် စီစဉ်သူများ ၊ စည်းရုံးရေးမှူးများ၊ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ ၊ ကြားဝင် ဖျန်ဖြေသူများ၊ ကြားဝင် ညှိနှိုင်းသူများ နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်သူများအား ပံ့ပိုးပေးနေသော သင်တန်းဆရာများ ၊ ပံ့ပိုးပေးသူများ နှင့် အခြားလက်တွေ့ ကျင့်သုံးသူများအတွက်ဖြစ်သည်။
SNAP: Synergizing Nonviolent Action and Peacebuilding (Arabic)
يسعى هذا الدّليل إلى إقامة جسور تواصل بين العاملين في مجال بناء السّلام من جهة والناشطين في مجالات التّحرّك غير العنيف من جهة أخرى. ويستعرض أساليب العمل المتاحة في كلا المجالين بصورةٍ إستراتيجيّةٍ وفعّالةٍ للمساهمة في تحويل النزاع. ويُبيِّن الدّليل طريقة تحقيق التّضافر بين الحوار ومهارات التّحرّك المباشر والمقاربات من أجل خدمة العدالة والسّلام المستدامين. أعدّ هذا الدّليل ليوضع بتصرّف المدرّبين والمُيسِّرين وسائر الأشخاص المتعاملين مع المنظمات والناشطين والوسطاء والمفاوضين وبناة السّلام الذين يرغبون في معرفة المزيد بشأن طريقة الدّمج بين إستراتيجيّات التّحرّك غير العنيف وبناء السّلام في عملهم.